Qarax kadhacay Masaajid kuyaala dalka Afgaanistaan oo dilay 14 ruux – Radio Daljir
Maajo 7, 2018 6:25 b 0
Kudhowaad 14 qof ayaa ku geeriyooday qarax xoogan oo kadhacay masaajid ku yaala bariga wadanka Afgaanistaan, iyadoo xiliga uu weerarka uu dhacay ay kasocotay masaajidka diiwaan galinta dadka ka qaybgalaya doorashada baarlamaanka ee dalkaasi ee loo asteeyey inay dhacdo horaanta bisha October.
Waheel Marjuux, oo ah afhayeen katirsan wasaaradda caafimaadka dadwaynaha ee Afgaanistaan ayaa sheegay inka badan sodon ruux inay ku dhaawacmeen weerarka oo kadhacay gudaha masaajidka Yacquubi ee magaalada Khost.
Dadka wax ku noqday qaraxa ayaa ka koobnaa dad masaajidka ku dukanayay iyo dad diiwaangalinta ku guda jiray, mana jirto cid sheegatay masuuliyadda weerarka.
Afhayeenka kooxda Taalibaan Zabihullah Mujahid ayaa sheegay inay weerarka wax lug ah ku lahayn kooxdooda.
Walaac nabadgalyo darro kasoo baxaya doorashada
Afgaanistaan ayaa u astaysan inay qabato doorashada baarlamaanka bisha October, weerar ayaa bilowgii hore ee bishan ka dhacay xarun dadka codaynaya lagu diiwaangaliyay oo ku taala magaalada Kaabuul ee xarunta dalka Afgaanistaan, weerarkaasi ayaa waxaa ku geeriyooday 63 qof, boqol kalena waa ay ku dhaawacmeen.
Shir looga hadlayo joojinta dhuxusha oo kafurmaya Muqdisho